အက်စ်ကိုးဘားရဲ့ သက်ညှာမှုကြောင့် အသက်ချမ်းသာရာ ရခဲ့တဲ့ ပီရူးအသင်းနည်းပြ
Pablo Escobar ရဲ့ သက်ညှာမှုကြောင့် အသက်ချမ်းသာရာ ရခဲ့တဲ့ ပီရူးအသင်းနည်းပြ
10 Oct 2018 . 7:00 PM
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက မူးယစ်ရာဇာကြီး ပတ်ဘလိုအက်စ်ကိုးဘား Pablo Escobar ရဲ့ နာမည်က အခုအချိန်အထိ နိုင်ငံတကာမှာ လွှမ်းမိုးထားနေဆဲ။ “The King of Cocaine” လို့ အမည်ပြောင်ရတဲ့ အက်စ်ကိုးဘားဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက မူးယစ်ဆေးဝါးလောကမှာ နေလိုလလို ထင်ရှားခဲ့သူ၊ ရာဇ၀တ်ကောင်တွေထဲမှာ အချမ်းသာဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သူ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အက်စ်ကိုးဘား သေဆုံးတာ (၂၅)နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပေမယ့် သူ့နာမည်ကတော့ အခုအချိန်အထိ မသေသေးဘူး။ မကောင်းတာတွေ အများကြီး ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အက်စ်ကိုးဘားလို လူမျိုးမှာ ကောင်းကွက်လေးတစ်ခုတော့ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ သူဟာ ဘောလုံးအားကစားနည်းကို နှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်နေတာပါပဲ။ အဲဒီအချက်ကြောင့်ပဲ အခု ပီရူးအသင်းကို ကိုင်တွယ်နေတဲ့ နည်းပြ ရီကာဒိုဂါရီကာ Ricardo Gareca ဟာ ဒီနေ့အချိန်အထိ အသက်ရှင်ခွင့် ရခဲ့တာပါ။
အဖြစ်အပျက်ကတော့ ဒီလိုပါ။ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက Medellin မှာ အက်စ်ကိုးဘားတို့ရဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းက တန်ခိုးထွားနေချိန် ၁၉၈၀ ကာလတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ပြိုင်ဘက်က Cali ဒေသအခြေစိုက် မူးယစ်ဂိုဏ်းပါပဲ။ ဒီနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ အားပြိုင်မှုမှာ သွေးမြေကျခဲ့ရတာတွေ၊ အသက်ချင်းထပ်ခဲ့ရတာတွေက အများကြီး။ Cali မှာရှိတဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းဟာ အက်စ်ကိုးဘားရဲ့ မိသားစုကို ဗုံးခွဲပြီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး အက်စ်ကိုးဘားဘက်က လူတွေ အတော်များများ သေခဲ့လို့ လက်စားချေဖို့ ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။
အက်စ်ကိုးဘားရဲ့ အဓိကပစ်မှတ်က Cali ဒေသအခြေစိုက်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ America de Cali ပါပဲ။ အက်စ်ကိုးဘားတို့ဘက်က America de Cali အသင်းရဲ့ ဘတ်စ်ကားကို ဗုံးခွဲပြီး တုံ့ပြန်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ရီကာဒိုဂါရီကာ (ပီရူးအသင်းနည်းပြ)ဟာ America de Cali အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့အချိန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အက်စ်ကိုးဘားဟာ သူ ပထမစီစဉ်ထားတာကို ဖျက်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အက်စ်ကိုးဘားဟာ ဘောလုံးဝါသနာအိုး တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီအကြံအစည်ကို ဖျက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အက်စ်ကိုးဘားရဲ့ လက်ရုံးတစ်ဆူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Jhon Jairo Velazquez ဆိုသူက အခုလိုဖွင့်ချခဲ့ပါတယ်။ “Boss (အက်စ်ကိုးဘား)က America de Cali ကလပ်က ကစားသမားတွေ အားလုံးရဲ့အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေတာဗျ။ အဲဒီအချိန်ကတည်း Cali ဘက်က ဂိုဏ်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အပြန်အလှန် ချနေချိန်ပေါ့။ အက်စ်ကိုးဘားရဲ့ ပစ်မှတ်ထဲမှာ ရီကာဒိုဂါရီကာလည်း ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Boss ရဲ့ မိသားစု ခံခဲ့ရတဲ့အတိုင်း America de Cali အသင်းရဲ့ဘတ်စ်ကားကို ဗုံးခွဲဖို့တောင် စီစဉ်ပြီးသွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ရီကာဒိုဂါရီကာ ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ Boss က ဘောလုံးဝါသနာအိုးဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအကြံကို အကောင်အထည် မဖော်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုလံဘီယာဘောလုံးလောကမှာ ဒုစရိုက်ဂိုးဏ်းတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက အတော်ကြီးခဲ့တာဗျ”။ ဒါကတော့ အက်စ်ကိုးဘားရဲ့ ဘောလုံးဝါသနာကြောင့် America de Cali ကစားသမားတွေ အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါပဲ။ ပရိသတ်တွေလည်း ဒီအကြောင်းအရာကို ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတရစေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . .
Photo:TyC Sports,The Sun,Mirror
Pablo Escobar ရဲ့ သကျညှာမှုကွောငျ့ အသကျခမျြးသာရာ ရခဲ့တဲ့ ပီရူးအသငျးနညျးပွ
ကိုလံဘီယာနိုငျငံက မူးယဈရာဇာကွီး ပတျဘလိုအကျဈကိုးဘား Pablo Escobar ရဲ့ နာမညျက အခုအခြိနျအထိ နိုငျငံတကာမှာ လှမျးမိုးထားနဆေဲ။ “The King of Cocaine” လို့ အမညျပွောငျရတဲ့ အကျဈကိုးဘားဟာ တဈခတျေတဈခါတုနျးက မူးယဈဆေးဝါးလောကမှာ နလေိုလလို ထငျရှားခဲ့သူ၊ ရာဇဝတျကောငျတှထေဲမှာ အခမျြးသာဆုံးအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့သူ။ ၁၉၉၃ ခုနှဈမှာ အသတျခံခဲ့ရတဲ့ အကျဈကိုးဘား သဆေုံးတာ (၂၅)နှဈနီးပါးရှိလာပွီဖွဈပမေယျ့ သူ့နာမညျကတော့ အခုအခြိနျအထိ မသသေေးဘူး။ မကောငျးတာတှေ အမြားကွီး ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ အကျဈကိုးဘားလို လူမြိုးမှာ ကောငျးကှကျလေးတဈခုတော့ ရှိပါသေးတယျ။ အဲဒါကတော့ သူဟာ ဘောလုံးအားကစားနညျးကို နှဈသကျတဲ့သူဖွဈနတောပါပဲ။ အဲဒီအခကျြကွောငျ့ပဲ အခု ပီရူးအသငျးကို ကိုငျတှယျနတေဲ့ နညျးပွ ရီကာဒိုဂါရီကာ Ricardo Gareca ဟာ ဒီနအေ့ခြိနျအထိ အသကျရှငျခှငျ့ ရခဲ့တာပါ။
အဖွဈအပကျြကတော့ ဒီလိုပါ။ ကိုလံဘီယာနိုငျငံက Medellin မှာ အကျဈကိုးဘားတို့ရဲ့ မူးယဈဂိုဏျးက တနျခိုးထှားနခြေိနျ ၁၉၈၀ ကာလတှမှော ဖွဈပါတယျ။ သူတို့နဲ့ ပွိုငျဘကျက Cali ဒသေအခွစေိုကျ မူးယဈဂိုဏျးပါပဲ။ ဒီနှဈဖှဲ့ရဲ့ အားပွိုငျမှုမှာ သှေးမွကေခြဲ့ရတာတှေ၊ အသကျခငျြးထပျခဲ့ရတာတှကေ အမြားကွီး။ Cali မှာရှိတဲ့ မူးယဈဂိုဏျးဟာ အကျဈကိုးဘားရဲ့ မိသားစုကို ဗုံးခှဲပွီး လုပျကွံသတျဖွတျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ ကံကောငျးထောကျမစှာနဲ့ လှတျမွောကျခဲ့ပွီး အကျဈကိုးဘားဘကျက လူတှေ အတျောမြားမြား သခေဲ့လို့ လကျစားခဖြေို့ ပွငျဆငျပါတော့တယျ။
အကျဈကိုးဘားရဲ့ အဓိကပဈမှတျက Cali ဒသေအခွစေိုကျကလပျအသငျးဖွဈတဲ့ America de Cali ပါပဲ။ အကျဈကိုးဘားတို့ဘကျက America de Cali အသငျးရဲ့ ဘတျဈကားကို ဗုံးခှဲပွီး တုံ့ပွနျဖို့ စီစဉျခဲ့တယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ရီကာဒိုဂါရီကာ (ပီရူးအသငျးနညျးပွ)ဟာ America de Cali အသငျးမှာ ကစားနတေဲ့အခြိနျပါ။ ဒါပမေဲ့ အကျဈကိုးဘားဟာ သူ ပထမစီစဉျထားတာကို ဖကျြခဲ့တယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အကျဈကိုးဘားဟာ ဘောလုံးဝါသနာအိုး တဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ အဲဒီအကွံအစညျကို ဖကျြခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အဲဒီအဖွဈအပကျြနဲ့ ပတျသကျပွီး အကျဈကိုးဘားရဲ့ လကျရုံးတဈဆူဖွဈခဲ့တဲ့ Jhon Jairo Velazquez ဆိုသူက အခုလိုဖှငျ့ခခြဲ့ပါတယျ။ “Boss (အကျဈကိုးဘား)က America de Cali ကလပျက ကစားသမားတှေ အားလုံးရဲ့အခွအေနကေို စောငျ့ကွညျ့နတောဗြ။ အဲဒီအခြိနျကတညျး Cali ဘကျက ဂိုဏျးနဲ့ ကြှနျတျောတို့ အပွနျအလှနျ ခနြခြေိနျပေါ့။ အကျဈကိုးဘားရဲ့ ပဈမှတျထဲမှာ ရီကာဒိုဂါရီကာလညျး ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ Boss ရဲ့ မိသားစု ခံခဲ့ရတဲ့အတိုငျး America de Cali အသငျးရဲ့ဘတျဈကားကို ဗုံးခှဲဖို့တောငျ စီစဉျပွီးသှားပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ ရီကာဒိုဂါရီကာ ကံကောငျးခဲ့ပါတယျ။ Boss က ဘောလုံးဝါသနာအိုးဖွဈတဲ့အတှကျ အဲဒီအကွံကို အကောငျအထညျ မဖျောခဲ့တာပါ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ကိုလံဘီယာဘောလုံးလောကမှာ ဒုစရိုကျဂိုးဏျးတှရေဲ့ လှမျးမိုးမှုက အတျောကွီးခဲ့တာဗြ”။ ဒါကတော့ အကျဈကိုးဘားရဲ့ ဘောလုံးဝါသနာကွောငျ့ America de Cali ကစားသမားတှေ အသကျခမျြးသာရာရခဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြပါပဲ။ ပရိသတျတှလေညျး ဒီအကွောငျးအရာကို ဖတျပွီး ဗဟုသုတရစမေယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ . .
by Naing Linn . 32 mins ago